Puntland: Musharrixiin Ka Hor Yimid Guddiga uu Magacaabay Madaxwayne Cabdiweli Gaas | Baligubadlemedia.com
Puntland: Musharrixiin Ka Hor Yimid Guddiga uu Magacaabay Madaxwayne Cabdiweli Gaas
Musharraxiinta u tartamaysa jagada madaxweynimada Puntland ee doorashada soo aaddan ee 2019ka qaar ka mid ah ayaa ka hor yimid guddigii uu shalay magacaabay madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, guddigaasi oo ahaa guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka,waxaana dhanka kale ay taageereen guddiga uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka.
Musharraxiinta oo saxafada kula hadlay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa diidmadooda ku sababeeyey qodobbo dhawr ah oo ay ka mid tahay caddaalad darro laga sameeyey xulidda xubnahaasi, la-tashi la’aan madaxweyne kuxigeenka, iyo guddoomiye Baarlamaan, eex, nin-jeclaysi, danaysi doorasho iyo arrimo kale isla qaddiyadahaasi ka ag-dhaw.
Hoos ka akhri, warsaxaafadeedka musharrixiinta;
Gabagabadii,Waxaa noo muuqata in tallaabooyinka uu qaadayo madaxweyne Cabdiweli ay keeni karaan burbur, khilaaf siyaasadeed iyo khal-khal amni taasoo uu madaxweynuhu keligiis masuul ka yahay. uun kula gal-galanaayo cid aan shaqo ku lahayn.